Eken Alfawise V50 Pro ကိုအရေးယူကင်မရာ, ၏စျေးနှုန်း ...
Aliexpress E ကိုလမ်းပြ။ ယူရိုအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, စျေးဝယ်, ဘာသာစကား Lithuanian, အကောက်ခွန်, အငြင်းပွားမှုများ, စျေးနှုန်းများ။
အစဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ technique ကိုလှုပ်ရှားမှုကိုကင်မရာEken Alfawise V50 Pro ကိုလှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
Eken Alfawise V50 Pro ကိုလှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ဇူလိုင်လ 2019 16 6: 54
V50 4K Pro ကိုက Ultra Slim 170 WIDE ရေ-resistant 2.4G ဝိုင်ဖိုင်အဝေးမှလှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
မူရင်း Eken V50 Pro ကို 4K Wi-Fi waterproof လှုပ်ရှားမှုကင်မရာအားကစား DV
Eken Alfawise V50 Pro ကို Ambarella Chip A12S75 4K 30FPS လှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
Eken Alfawise V50 Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | $4အောက်မှာများအတွက်ရီးရဲလ် 70K?!
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Eken Alfawise V50 Pro ကိုလှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
X ကိုက x 5.93 4.11 2.14 စင်တီမီတာ x ကို 2.33 1.62 0.84 လက်မ x ကို
X ကိုက x 23.00 10.00 7.00 စင်တီမီတာ x ကို 9.06 3.94 2.76 လက်မ x ကို
ဝေဟင်ဓါတ်ပုံပညာ, ဆိုင်ကယ်, Extreme အားကစား, မော်တော်ဆိုင်ကယ်, နှင်းလျှောစီး, ရေအောက်
PC ကွန်ပျူတာအားဖြင့်ကို USB AC အ charger ကို, ကို USB တာဝန်ခံ
မက်စ်ပြင်ပ Card ကိုထောက်ပံ့
TF 32G (မပါ)
1 လှုပ်ရှားမှုကင်မရာ (ဘက်ထရီပါဝငျ) Remote 1 x x, 1 waterproof ဖြစ်ရပ်မှန် x, ဘား 1 x ကိုငျတှယျ, 1 x ကိုသံခမောက်လုံးတောင်ပေါ်မှာ, tripod 1, 1, 1 က x Clip ကို USB Cable ကို x x,6တောင်ပေါ်မှာ x
Eken Alfawise V50 Pro ကိုလှုပ်ရှားမှုကင်မရာဗီဒီယိုများ
အဘို့အ3ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Eken Alfawise V50 Pro ကိုလှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
ဗလာဒီမာ - ဇွန်လ 2019 10
အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းများလိုဗက်ကီးယားအတွက် me.In 11 ရက်ကိုအပ်။ , အဆိုပါ description.He atitinka Great.The ထုတ်ကုန်ငါ၏အ expectations.The ထုပ်ပိုး accessories.So ဝေးငါသာစမ်းသပ်ပြီးင်ကောင်းသောအများအပြားပါဝင်ပါတယ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန် good.I ငါအကြောင်းကိုအမျက် ထွက်. ကောင်းတစ်ဦး SD ကမှတ်ဉာဏ် card.The တစ်ခုတည်းသောအရာ DHL ရဲ့ပေးပို့ company.The အထုပ်ဖြစ်ပါတယ်သုံးပြီးအကြံပြုငါ့ထံသို့တိုက်ရိုက်မကယ်မနှုတ်ခဲ့ဘူးလှပါတယ်။ သူတို့ကမြေပြင်ကိုပစ်ချ၏။ အဆိုပါထုပ်ပိုး damaged.Fortunately, ကင်မရာထုတ်ကုန်နှင့်အတူ damaged.DHL stupid.I'm ပျော်ရွှင်ရမပြုခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းမှာခဲ့ပါတယ်။ ငါဝယ်အကြံပြုပါသည်။ အဘယ်သူမျှမ image stabilization ။ ရှည်လျားသောထိတွေ့မှုမပါ။ အဘယ်သူမျှမနှေးပြကွက်
Harrison - ဇွန်လ 2019 10
alot အင်္ဂါရပ်၏စျေးနှုန်းအဘို့ကောင်းသောကင်မရာ, ကိုယ့်မိုင်း recieved ပေမယ့်တစ်ဦး freinds အသုံးပြုသောနှင့်တစ်ဦးအပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်ဘယ်တော့မှကျွန်မရဲ့ခရီးစဉ်အပေါ် posted ဗီဒီယိုထွက်စစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါထုပ်ပိုးဝေးငါသာစမ်းသပ်ပြီးင့်အများအပြားကောင်းသော accessories.So ပါရှိသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကောင်းသောကြည့်ရှုသည်။ ငါစွမ်းဆောင်ရည် / စျေးနှုန်းအချိုးအတွက်အကောင်းတစ်ဦး SD ကမှတ်ဉာဏ် card.The ကင်မရာ unreservedly အကြံပြုသည်ကို အသုံးပြု. အကြံပြု! ငါ Recomendo ဒီကင်မရာမဝယ်ကြဘူးဆို negative.I မတှေ့ခဲ့ပေ။
Takis - ဇွန်လ 2019 10
ဒါဟာသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံရကျိုးနပ်သည်ဒါကအလွန်ကောင်းသောဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်ဒေါင်းလုပ်အတူတစ်လျောက်ပတ်သောကင်မရာကိုပါ! အဆိုပါထုတ်ကုန်လျင်မြန်စွာရောက်ရှိ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ packaging.The ဆက်စပ်ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည် / စျေးနှုန်းအချိုးတစ်ပွင့်လင်း type ကိုအမှုအဖြစ်ကင်မရာ tripod.The ပါဝင်သည်အတွက် unreservedly ဖြစ်ပါသည် !: အကြံပြုငါမဆို negative.I ကဒီမှာကင်မရာ & ဗီဒီယိုအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် posted ရှိသည်ဟုမတှေ့ https://www.youtube.com/watch?v=ZwnjtUDU4WQ
Xiaomi ကရီ 1080P Action Cam
ပိုးစုန်းကြူး Hawkeye64K Wi-Fi FPV အရေးယူအခန်းထဲက
Elephone ele Explorer ကို 4K အရေးယူအခန်းထဲက
A9 1080P HD ကိုလှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
Xiaomi က Mijia 4k အရေးယူအခန်းထဲက
SJCAM SJ7 STAR 4K အရေးယူအခန်းထဲက
အားကစား M3 စမတ် laiktoris
Xiaomi က Mi 70mai Dash Cam အသံဖမ်း